दाँत पहेँलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नलिनुहोस् – Khabar Art Nepal
दाँत पहेँलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नलिनुहोस्
By Pasang Tamang	 On ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार २१:५९
काठमाडौँ । हाम्रो व्यक्तित्वमा असर पार्ने एउटा दाँत पनि हो । दाँत सेतो छ भने हाँस्दा पनि निकै राम्रो देखिन्छ । अनुहार सुन्दर छ तर दाँत पहेँलो छ भने ती व्यक्ति जतिसुकै सुन्दर भए पनि उनको सुन्दरता चन्द्रमा दाग लागे जस्तै हो । कहिले काही यी पहेँलो दाँतका कारण हामीले अरुको अगाडी लजिज्जत हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । धेरै व्यक्तिहरु जति दाँत ब्रस गरेपनी पहेँलो नजाने समस्याबाट हैरान छन् ।
उनीहरु आफ्नो दाँत सेतो र सुन्दर बनाउँन धेरै उपायहरु पनी अपनाई रहेका हुन्छन् तर ती उपायहरुले धेरैलाई काम गरिरहेको हुँदैन तर केही यस्ता घरेलु उपायहरु तल बताईको छ जसको कारणबाट तपाईले यी समस्याबाट राहत प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
नुन र तेल
गाउँघरतिर नुन र तेलले दाँत सफा गर्ने चलन अझै पनि छ । नुनमा २ र ४ थोपा शुद्ध तोरीको तेल मिलाएर दाँत सफा गर्ने गर्नाले केहि दिनमै दाँतको पहेँलोपना हटेर जान्छ ।
तुलसीमा दाँतको पहेंलोपन हटाउने एक अदभूत शक्ति रहेको छ । तुलसीको पातलाई घाममा सुकाउने र सुकेपछि यसको पाउडर बनाइ टुथपेस्टसँग मिलाएर ब्रस गर्ने गर्दा दाँतको पहेँलोपना हटेर चमक बनाउँछ ।
हस्तमैथुन गर्दै हुनुहुन्छ ? युवा र युवती दुवैले यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस्
के तपाईलाई निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस् मिठो निन्द्रा लाग्छ